आइजीपी खनाल–डोभाल गठजोडमा सन्देह, गृहमन्त्री र सचिवबीच छलफल - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा पाकिस्तानलाई ‘आतंककारीको संरक्षक राष्ट्र’ का रुपमा प्रस्तुत गर्ने भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तावमा जनाएको सहमती सल्ट्याउन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेका छन्।
दुवै मन्त्रालयले महानिरीक्षक खनालबाट कसरी उक्त निर्णय हुन गयो भनेर आन्तरिक छानबिन समेत गरिरहेका छन्। यो विषयमा केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव प्रेमकुमार राईबीच छलफल भएको छ।
मन्त्री र सचिवबीच यो विषयमा छलफल भएसँगै महानिरीक्षक खनालले एक्लै चालेको सो कदम झन् सन्देहको घेरामा परेको छ।
अजित डोभालसहित बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखहरूसँग महानिरीक्षक खनाल
गृहमन्त्रीलाई के भयो ब्रिफिङ?
बिमस्टेक सचिवालयले २०७६ चैत ७ गते बैंककमा भएको सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा डोभालले राखेको ‘भारत शासित कस्मिरको पुलवामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादीले हमला गरेको’ भन्ने विषयमा नेपालले समर्थन जनाएकाले सरकारबाट अनुमोदन गर्न पत्र पठाएको थियो। पत्रबारे गृहमन्त्री र सचिवबीच कुराकानी भएको हो।
मन्त्री थापा निकट स्रोतअनुसार महानिरीक्षक खनालले जनाएको सहमती सुनेर गृहमन्त्री र सचिव दुवैले आश्चर्य जनाएका थिए।
‘महानिरीक्षक खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लंघन गरेको विषय सचिव राईले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भयो’, गृहमन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो विषयमा अग्रिम छलफल भएको थियो कि थिएन भन्ने बारे पनि उहाँहरुबीच कुराकानी भयो।’
गृहसचिव राई हाल स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा छन्। उनी यहीँ हुँदा यो छलफल भएको हो।
महानिरीक्षकले दुई देशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बैठकमा जाँदा त्यसका अन्तर्वस्तु गृह र परारष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र पेश गर्न पाउँछन्। यो प्रकरणमा उनले गृह र परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरेर परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै डोभाललाई साथ दिएको देखिएको छ।
पूर्व छलफल मात्र नगरेको होइन महानिरीक्षक खनालले स्वदेश फर्केपछि समेत मन्त्री र सचिवलाई ब्रिफिङ नगरेको पुष्टि भएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा सरकारसँग पूर्वस्वीकृति नलिइ देशको परराष्ट्र नीतिविपरित डोभालसँग गरेको गठजोड सन्देहजनक रहेको निष्कर्षमा गृह पुगेको हो।
‘मन्त्री र सचिवबीचको संवादपछि यस विषयमा पूर्व जानकारी नभएको एवं स्वदेश फर्केपछि पनि सही ब्रिफिङ नगरेको देखियो। सचिवज्यू फर्किएपछि केही निर्णय होला’, ती अधिकारीले भने।
मन्त्री थापाको कार्यकक्षमा भएको सो छलफलमा गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ समेत सहभागी थिए।
तीन बैठक, तीन फरक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि
बिमस्टेकमा तीन वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक परम्परा सुरू भएको हो। बैंककमा भएको बैठक तेस्रो हो। यो क्षेत्रीय संगठनमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक डाक्ने परम्परा थालनी गर्ने मुख्य डिजाइनर उनै डोभललाई मानिन्छ। यसको दोस्रो बैठक बंगलादेश र पहिलो बैठक भारतमा भएको थियो।
तीन वटै बैठकमा नेपालले फरक फरक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख’ भनेर पठाएको देखिन्छ। पहिलो बैठकमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। दोस्रो बैठकमा बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत प्रोफेसर डा. चोपलाल भुसाल सहभागी भएका थिए। तेस्रोमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहभागी भएका हुन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा सवाल र प्रतिआतंकवाद मामिलामा केन्द्रित रहने यो बैठकमा बिमस्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुबाट मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, सचिव र सेनाको गुप्तचर विभागका प्रमुखको सहभागिता रहँदै आएको छ। अन्य सदस्य राष्ट्रहरूबाट तीन वटै बैठकमा उही प्रतिनिधि सहभागी भएका देखिन्छन्।
महानिरीक्षक खनालका कारण मित्र राष्ट्रबीचको सन्तुलन नै बिग्रन सक्ने अवस्था आएपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख को हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी एवं सुरक्षाविद् उमेशकुमार भट्टराई देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नतोकिँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्। भारतसहित धेरै देशहरुले सरकारको नीतिगत तहमा काम गर्न सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने गर्छन्।
‘हामी आतंकवादको बिरोध गर्दछौं यसमा दुईमत रहेन,’ भट्टराईले नेपालखबरलाई लिखित जवाफ पठाउँदै भने, ‘सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्बन्धमै समस्या आउने विषयमा सरकार चनाखो रहनु जरुरी छ। देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नहुँदा यस्तो भएको देखिन्छ।’
प्रकाशित 2019-05-14 15:20:57